Sariirta miisanka leh ee sariirta leh sariiraha sariiraha sariiraha sariiraha carruurta sariiraha sariiraha sariirta fudud | Handuan
Sariirta miisanka leh ee sariirta leh sariiraha sariiraha sariiraha sariiraha carruurta sariiraha sariiraha sariirta fudud
Handuan ee No.19, Kangtai South Road, block B, Shatou Industrial Park, Magaalada Jiujiang, Degmada Nanhai, Foshan City Waxyaabaha ugu muhiimsan Heerka sariirta oo leh sariiraha sariiraha sariirta ilmaha oo isku darka sariirta ilmaha sariir fudud oo sariirta sariirta ah. Handuan waxaa la soo saaray iyadoo la adeegsanayo xoogga farsamada ee xoogga leh, qalabka horumarsan. Waxay leedahay dhar adag oo waara oo xajinaya dhalaalaya iyo qaab si loo hubiyo in muuqaal dhammaystiran u yahay qolka jiifka iyo hurdada farxadda leh ee habeenkii. Handuan waxaa loo tijaabiyey deganaanshaha cabbirka, waxqabadka iyo xawaaraha midabka si uu ula kulmo shuruudaha sharci ee warshadaha gogosha.
Miisaska yar yar ee miisaska miisaska casriga ah ee miisaska miiska qoraalka ah ee isku dhafan miiska kombiyuutarka Nordic iyo miisaska iskudhafka kuraasida kuraasta
Handuan ee No.19, Kangtai South Road, block B, Shatou Industrial Park, Magaalada Jiujiang, Degmada Nanisha, Foshan City Waxyaabaha ugu muhiimsan ee casriga ah miisaska miisaska yar ee casriga ah ee iskuxiran miiska qoraalka labiska miiska kumbuyuutarka guriga Nordic iyo miisaska iskudarka daraasadaha wadajirka ah. Foshan Handuan Furniture Co., Ltd. waxay u isticmaashaa tayo sare sidii agab weyn. Sheyga wuxuu soosaaraa isku halaynta la doonayo. Guryaheedii adkaa waxay adkaysanayaan waxyaabo tayo sare leh iyo alaabo gaabin ah si looga hortago wax shoog ah. Qalabkayaga loo yaqaan 'Handuan' waxaa lagu soo saari karaa qaabab kala duwan oo nashqadeyn ah iyo tilmaamo gaar ah.